Nianjera ny fiaramanidina prototype tany Russia ary namono ny olona rehetra tao anaty sambo
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Rosia » Nianjera ny fiaramanidina prototype tany Russia ary namono ny olona rehetra tao anaty sambo
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • Vaovao Mafana Rosia • Safety • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Nahatratra 1.5 kilometatra (0.9 kilaometatra) ny tsy fahatongavan'ilay fiaramanidina ary nipoaka tampoka noho ny fifandonana tamin'ny tany.
Nianjera ny fiaramanidina tany akaikin'i Moskoa.
Ny fiaramanidina fitaterana miaramila rosiana vaovao dia may sy nianjera tamin'ny sidina voalohany.
Tsy nisy tafavoaka velona tamin'ny fianjeranan'ny fiaramanidina Moskoa.
Ny fiaramanidina fitaterana rosiana vaovao dia nianjera nandritra ny sidina fitsapana rehefa nanandrana ny hidina amin'ny tobin-tafika Kubinka teo ivelan'ny Moskoa izy, ary namono ny olona telo tao anatiny.
Nahatratra ny 1.5 kilometatra (0.9 kilaometatra) ny tsy fahatongavan'ilay fiaramanidina ary nipoaka tampoka izy rehefa nifatratra tamin'ny tany izy.
Raha ny angon-drakitra voalohany dia noho ny fahamaizana tao anaty motera elatra ankavanan'ny fiaramanidina no nahatonga ny fianjerana.
Nanamafy ny lozam-pifamoivoizana ny mpanamboatra ny fiaramanidina, United Aircraft Corporation, tamin'ny filazany fa talohan'ny nianjeran'ilay fiaramanidina prototype dia nirehitra ny motera ankavanan'ny fiaramanidina ka nahatonga ny Il-112V nivily niankavanana. Nanomboka namoy ny hafainganam-pandehany ny fiaramanidina talohan'ny nivadihan'izy ireo ary nianjera tamin'ny tany akaiky izy Toeram-piaramanidina Kubinka.
Ny United Aircraft Corporation (UAC) dia nitatitra fa ny fiaramanidina dia namily ny lohan'ny mpanamory fiaramanidina an'ny Ilyushin Aircraft Company, mpanamory fiaramanidina kilasy voalohany, Hero of Russia Nikolai Kuimov, pilotam-panadinana kilasy voalohany Dmitry Komarov ary injenieram-panadinana kilasy voalohany Nikolai Khludeyev .
Rostec, orinasan-draharahan'ny United Aircraft Corporation, dia nanambara fa hamorona vaomiera iray hanadihady ny lozam-pifamoivoizana izy, ary manamarika fa mbola eo amin'ny dingana andrana izany.
Raha ny loharanom-baovao iray tamin'ny fampiharana ny lalàna dia efa tafaverina ny vatana mangatsiakan'ny ekipa mpiambina telo an'ny fiaramanidina Ilyushin Il-112V farany teo.
Loharanom-baovaon'ny indostrian'ny seranam-piaramanidina no nilaza fa ny ekipan'ny lyushin Il-112V dia nanandrana namonjy ny fiaramanidina hatramin'ny ora farany ary namily ny fiaramanidina lavitra ny trano fonenana.